Gazety Telo NohoRefy: 60 taona -Hôtel Panorama, 11 Jona 2016 - jeannotramambazafy.overblog.com
Publié le 12 Juin 2016 par Jeannot Ramambazafy
Raha misy ny tia tanindrazana tena tia tanindrazana dia ireo namorona ny gazety "Telo Noho Refy" tamin’ny taona 1956 misy lahatsoratra amin'ny teny malagasy rano iray sy 100%. Izany hoe tao anatin’ny fanjanahan-tany frantsay tanteraka. Marihina fa nanomboka io taona 1965 ka hatramin'izao taona 2016 izao, dia gazety tsy miankina, na amina antoko politika, na amina mpanao politika ny gazety "Telo Noho Refy". Samy tranainy tokoa fa hafa ny gazety "Lakroa" izay an'ny fiangonana Katolika; hafa ny gazety "Imongo Vaovao" izay manaraka ny ideolojian'ny antoko noforonin'i Jean Ralaimongo.
Inona moa ny tolona natao tamin’izany vaninandro izany? Dia ny fanoherana ny fomba amam-panaon’ireo vazaha izay nitsetsitra ny harem-pirenena malagasy. Ny loza dia ny vahoaka malagasy ihany no nampiasainy tamin’ny alalàn’ny SMOTIG (« Service de la Main-d'Œuvre des Travaux Publics d'Intérêt Général ») nanomboka tamin’ny taona 1928 tamin’ny andron’ny governera jeneraly Olivier. Izany hoe nampiasain’ny Malagasy fa tsy nandray karama izy ireo. Santionany io. Ohatra iray ihany anefa io.
Fahafahana ny tanjona tamin’izany fotoana izany ary nitohy tamin’ny fitakiana ny fiverenana ny Fahaleovantena. Tsy mora ny tolona ary saika nahiditra am-ponja daholo ny ankamaroan’ny mpanao gazety naneho hevitra mikasika izany Fahafahana sy Fahaleovantena izany. Anisan’izany i Rakotondrasoava Georges, iray amin’ireo efatra mianadahy nanangàna ny gazety Telo NohoRefy. Tao koa ry Jules Ranaivo, Arsène Ramahazomanana sy ny maro tsy voatanisa. Amin’ireo, izany figadrana izany, no ny fitiavan-tanindrazana, dia voninahitra sy fanomezana diplaoma azy ireo, araka ny fitantaran’i Baovola Ramahazomanana, zanak’i Arsène Ramahazomanana.
Tamin’ny taona 2013 dia nodimandry i "Georges" (fiantsoana an'i Rakotondrasoava Georges. Fa mbola velona kosa ny telo amin’ireo nanangàna ny gazety ary nanohy izany tolona izany Mariette vadiny, ny zanany, Soava Andriamarotafika, sy ny zafikeliny Fetraniaina Mamimbahoaka. Fa aiza ho aiza izao isika Malagasy eo anatrehan’izany Fitiavan-tanindrazana, Fahafahana sy Fahaleovantena, amin’izao repoblika faha-efatra izao? Tsotra ny valiny: nihemotra tanteraka ireo. Niverina ny fanjanahana amina fomba hafa dia ny famarotana ny tanindrazana ; niverina ny fanagadrana mpanao gazety toa ireo namana Jean-Luc Rahaga sy Didier Ramanoelina, ao amin’ny gazety « Madagascar Matin »; niverina ny fanampenam-bava ny tsy mitovy hevitra amin’ny fitondrana; niverina ny tsy fahazoana maneho hevitra eny ankalamanjana. Satria matahotra mafy fanongam-panjakana ny fitondrana Hvm/Rajaonarimampianina.
Akaiky anefa ny 26 Jona 2016, andro hankalazana ny faha-56 taona niverenan’ny Fahaleovantan’ity Nosy malala ity. Nefa dia fiainana ao anaty tebiteby no iainan’ny ankamaroan’ny Malagasy tsy mahalala intsony izay ho aviny. Ka asa, hiteny toa an’i Marc Ravalomanana (momba ny 29 Marsa 1947) koa atsy ho atsy ny filoha Hery Rajaonarimampianina ka hilaza fa mbola tsy teraka izy tamin’ny taona 1956. Torak’izany koa ny jeneraly Florens Rakotomahanina izay manana anaran’olona "hikasa hanakorontana", hono.
Tsotra rangahy ireto a : gadrao daholo ireo olona tonga tao amin’ny hotely Panorama, ny 11 Jona 2016! Satria ireo izany no « mpikomy ». Ny mahavariana dia ny tsy nahatongavan’ny minisitry ny Kolontsaina sy ny minisitry ny Serasera dia Jean Jacques Rabenirina sy Vonison Andrianjato izany. Fahadisoana eo anatrehan’ny Tantara izany. Fa azy ny azy ary ny « lalao » mbola ela. Ny filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety (OJM), Gérard Rakotonirina, moa dia tsy hita tabilao ihany koa.
F’angaha dia manomboka sy mifarana amin’ny fitondran’i Hery Rajaonarimampianina ny atao hoe Firenena malagasy e!? Ny vahoaka no maha firenena ny firenena iray. Mitoetra ireo fa ny mpitondra -izay mpiasam-bahoaka ihany- mandalo fotsiny ihany. Tsy maintsy miala eo ireo na ho ela na ho aingana. Ary raha momba ireto Hvm ireto aloha dia ho maro kokoa ny Malagasy no hifaly avanja rehefa lasa noho ireo manodidina azy vitsy an’isa miady mafy ny fifikirany amin’ny sezany. Ary ny tena mampahonena dia mpanao gazety sasany mihitsy no manaiky vidiam-bola hamadiana izany tolona nolofosan'ireo ray aman-dreny nanomboka ny taona 1956 mandrak'ity ny androany.
Misy farany anefa ny zava-drehetra eto ambanin'ny masoandro. Koa eo ampiandrasana izany tena Fahafahana sy Fahaleovantena izany dia arahabaina eto aloha ny gazety "Telo Noho Refy" nahatratra izany 60 taona izany sy ny 100 taonany ihany koa. Ny olona no mety ho gadraina, ho vonoina, ho levona, fa ny ideolojia dia mitoetra mandrakizay.
Jeannot Ramambazafy sy Harilala Randrianarison – 11 Jona 2016
← Ireo mpanao gazety ACHROPOL... Le régime Rajaonarimampianina... →